ကြာသပ​တေး သားသမီး နဲ့ ချစ်သူဖြစ် ရင် ဒီအချက်တွေ သိထား သင့်ပါတယ် – Shwewiki.com
ကြာ သပ​တေး သားသမီးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
ကြာသပ​တေး သားသမီးတွေဟာ ချစ်သူကို အရမ်း ချစ်တတ်ကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် သူတို့ကို စိတ်နာအောင်တော့ သွားမလုပ်လေနဲ့… စိတ်နာရင် တစ်သက်လုံး လှည့်ကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူးနော် …. ။ စိတ်ကတော့ ကောက်သလားမမေးနဲ… အားနေ တခုခုကို ကောက်နေရမှ… အကြာကြီးတော့ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး… . ။
သူတို့ဟာ အရှက်အကြောက် အရမ်းကြီးတယ်… ချစ်သူကို စာနာနားလည်မှုလည်း ပေးနိုင်တယ်… ပေးကမ်းရက်ရောတဲ့ နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူး… ။ ဥာဏ်ကောင်းသလောက် တခါတလေမှာ အပျင်းကြီးတတ်တယ်… ဘယ်လောက်တောင် ပျင်းလည်းဆိုတော့ ပျင်းရမှာတောင် ပျင်းနေတတ်တယ်… ။
စကားနည်းတယ်လို့ ထင်ရတယ်… အဲ့ဒါဟာလည်း မသိတဲ့သူတွေနဲ့သာ နည်းတာပါ… သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာတော့ သူပဲစကားအများဆုံး… ။ လူချစ်လူခင်များသလောက် လူမုန်းကလည်း များပါသေးတယ်… ဒါပေမယ့် အကြောကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ” ခွေးဟောင်တိုင်း ထမကြည့်တတ်ဘူး “… ။
သူတို့ကို သေးသေးတော့ သွားမတင်လေနဲ့… လုံးကြီးတင်ပီး အဆံပါခတ်ပစ်လိမ့်မယ်… ။ အချစ်ရေးမှာတော့ အနည်းငယ် ကံခေတတ်ပါတယ်… မရနိုင်တာကိုမှ တန်းတန်းဆွဲ ဖြစ်နေတတ်တာ ကြာသပ​တေးသား/သမီး လေးတွေပါ… ။
ကွာသပ​တေး သားသမီးနဲ့ ခဈြသူဖွဈရငျ ဒီအခကျြတှေ သိထားသငျ့ပါတယျ
ကွာသပ​တေး သားသမီးနဲ့ ခဈြသူဖွဈရငျ ဒီအခကျြတှေ သိထားသငျ့တာပဲဖွဈပါတယျ … ။
ကွာသပ​တေး သားသမီးတှဟော ခဈြသူကို အရမျး ခဈြတတျကွပါတယျ… ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို စိတျနာအောငျတော့ သှားမလုပျလနေဲ့… စိတျနာရငျ တဈသကျလုံး လှညျ့ကွညျ့မှာ မဟုတျဘူးနျော …. ။ စိတျကတော့ ကောကျသလားမမေးနဲ… အားနေ တခုခုကို ကောကျနရေမှ… အကွာကွီးတော့ စိတျမဆိုးတတျဘူး… . ။
သူတို့ဟာ အရှကျအကွောကျ အရမျးကွီးတယျ… ခဈြသူကို စာနာနားလညျမှုလညျး ပေးနိုငျတယျ… ပေးကမျးရကျရောတဲ့ နရောမှာလညျး နှဈယောကျမရှိဘူး… ။ ဉာဏျကောငျးသလောကျ တခါတလမှော အပငျြးကွီးတတျတယျ… ဘယျလောကျတောငျ ပငျြးလညျးဆိုတော့ ပငျြးရမှာတောငျ ပငျြးနတေတျတယျ… ။
စကားနညျးတယျလို့ ထငျရတယျ… အဲ့ဒါဟာလညျး မသိတဲ့သူတှနေဲ့သာ နညျးတာပါ… သူငယျခငျြးတှေ ကွားမှာတော့ သူပဲစကားအမြားဆုံး… ။ လူခဈြလူခငျမြားသလောကျ လူမုနျးကလညျး မြားပါသေးတယျ… ဒါပမေယျ့ အကွောကတော့ သိတဲ့အတိုငျးပဲ ” ခှေးဟောငျတိုငျး ထမကွညျ့တတျဘူး “… ။
သူတို့ကို သေးသေးတော့ သှားမတငျလနေဲ့… လုံးကွီးတငျပီး အဆံပါခတျပဈလိမျ့မယျ… ။ အခဈြရေးမှာတော့ အနညျးငယျ ကံခတေတျပါတယျ… မရနိုငျတာကိုမှ တနျးတနျးဆှဲ ဖွဈနတေတျတာ ကွာသပ​တေးသား/သမီး လေးတှပေါ… ။